Yima, Trip — Didn't You Retire? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Yima, Uhambo - aniwunikelwanga umhlalo?
kwiinyanga Isibini ezidlulileyo ndingakhange wonke ngokuthi libhengeze album entsha kraca, “phakama.” Ongayiqondiyo ngayo indlela kunzima ukuba wayethule phambi ileyibhile wam ndaya zoluntu. Yelicwecwe Wayefunda imisebenzi ngaphezu konyaka, kwaye mna ukulinda ukuxelela wonk 'ubani - ngokukodwa abo waqhubeka ecela xa esasiphosa into entsha.
Impendulo ngoko kude kube akhuthazayo ngokunzulu. Ndivuya gqitha ukuba abantu baye baqhubeka ukuxhasa nam nangona ndikhe abahle cwaka iminyaka emibini edlulileyo. uthando lwakho nemincili landile kuphela am.
Enye iimpendulo mna kusimangalise ngokuthi oku omnye: "Yima, Ndicinga ukuba umhlala?"Lo mbuzo undilandelayo ngeenxa njengesithunzi. Ndiye wathetha ngayo ndlebe, tweets, kwaye izithuba blog, kodwa ndiyazi ukuba Akukacaci ukuba abanye. Makhe kuqhubeka ukuzama ukubeka ngqo irekhodi: Andizange umhlala.
e 2012, Ndabhengeza ukuba usaya "unyathele kude umculo." Ewe,, Ndiyazi ukuba izandi umhlala-ikhe-, kodwa ngabom akazange ukusebenzisa ukuba ilizwi. Ndazigcina ngabom ezingacacanga kuba mna ndandingekho 100% ukuba oko bekuya kanje.
Bendisazi ukuba kunokwenzeka ukuba "Ubomi Good" yaba album yam yokugqibela, kodwa Ndandingaqinisekanga. Nantsi into e nda ndiyazi: khona apho kuya kubakho enkulu ephambili Utshintsho ukuba kwakuza kubakho iinguqu mna njani enxulumene umculo. kuba ndiya endleleni kunye emcees amanye kangangoko. Bendingayi kuba nako igeza phandle iqela lomculo olutsha. akuyi kuba lixesha rapper ngokupheleleyo. Ndandisazi Ndandifuna ukunceda kumfundisi ecaweni kaThixo.
Ukususela ngelo xesha, Bendikhe ukukhonza ecaweni yam Washington D.C. kwiindima ezahlukeneyo njengomalusi. Ndenze umsebenzi admin, kushumayela nokufundisa, ubulungiseleli ulutsha, iingcebiso lomtshato, etc. Ndaya iinyanga ngaphandle ukwenza nayiphi ibonisa okanye ukubhala elinye bar ye ingoma kuba noxanduva ecaweni. Ndade bahlala ngaphandle 2013 Tour Unashamed. Ndingafanelana Ndandikukhumbu- ekudaleni umculo entsha, Ndithanda oko bendikhe ukwenza. imiba yempilo zenze kube nzima ngamaxesha, kodwa loo nto ibe ixesha nayinzuzo usapho lwam kwaye nam.
Emva kwaloo nyaka wokuqala yexesha elizeleyo njengomalusi, Ndagqiba ekubeni ngokucothayo ukusebenza irekhodi entsha. incindi My zokudala sele kwenzeki-, yaye ukulungele ukuya. Kodwa endaweni inyanga ezintlanu okanye ezintandathu kugqajukelwa yokubhala non-stop nokurekhoda, le album ekhawulezileyo kwaye ngokuthe ukususela umculo Yayingeloxesha umsebenzi wam ngokupheleleyo. Abasebenze phandle kakhulu kuba mna ngokucothayo craft ingoma nganye, asithabathele ukusondela bafezeke kangangoko.
Ndagqiba ukusebenza umvelisi enye neli xesha, kunokuba amkele indlela angensiwe iqelana guys ezahlukeneyo. Xa wazisa ingcamango Gawvi wayemthanda oko, kwaye siziphusha omnye komnye ukwenza into emangalisayo. uhambo Wonke endasenza Atlanta ibalulekile kuba nzima ukufumana kude nosapho ecaweni imisebenzi. Kodwa apha kwisithuba sonyaka emva, kwaye loo nto phantse phandle!
Ndiyazi abanye abantu nangoku bedidekile ngoko ukuba ulindele kum kwixesha elizayo. Kukho ziwayo emininzi, kodwa ndiza kukuxelela kwenza ukuba mna:
– Ndisafuna ukuba umfundisi.
– Ndisafuna ukwenza umculo.
– Ndisafuna baye baphindaphinda uthethe.
– Ndisafuna ukubhala iincwadi.
Kwaye ndizama ukufumana phandle indlela okanye ukuba ndinako ukukwenza zonke ezo zinto ngendlela ezukisa uThixo, ngoxa e elithembekileyo kusapho lwam kwaye ibandla likaThixo.
Ngaba “phakama” kuba icwecwe lam wokugqibela? Isenokuba, kodwa andiyi ndiyathemba. Okwangoku, Ndifuna ukonwabela mzuzwana ukwabelana nani nonke into ndicinga umsebenzi wam ogqibeleleyo. Kuninzi iye yatshintsha ukususela 2012, kodwa into enye uhlala enye: UYesu uyiNkosi, kwaye ndifuna ukuba imbeko kuye umculo wam.
Michael • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 4:47 mna • impendulo
Ndiyavuya ukuva umculo entsha Trip kuLee. Ayikwazi ukulinda ukuba albhamu entsha. Eneneni a guy abanetalente
tony • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 8:32 mna • impendulo
Good Day umzalwana wam olungileyo? Its yinto eyoyikekayo ukuba uthando lwakho nomnqweno umculo usaqhubeka ayahamba emithanjeni yakho ngokunjalo umnqweno wakho ukusasaza ilizwi likaThixo ngokusebenzisa iintshumayelo. I lengqondo indlela izinto ixesha elide ukuba kunye nentsapho, umculo, imisebenzi zolungiselelo etc. Ozelwe D.C kunye wakhulela Ft. Worth, into yayo enkulu ukubona umzalwana entanyeni wam yehlathi yokwenza umsebenzi kaThixo kuyo yonke indawo.
Enkosi umzalwana umculo.
Francis • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:14 mna • impendulo
Siyabulela elubala okuqhubekayo!
MrAveryBrown • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:19 mna • impendulo
Trip usoloko ziyafana ngabom indlela yakhe yokufundisa, ukushumayela, nomculo, leyo eye wandikhuthaza kwaye iyaqhubeka andikhuthaze, ngemihla. Xa isaziso sokuqala senziwa 2012, I ndingazi ukuba igosa “umhlala-phantsi”, nje shift qhinga ingqalelo kwezinye izinto. nangoku, uye ubuncwane balancing ukushumayela, ukufundisa, umculo, nosapho ngendlela eyoyikekayo. Yiyo loo nto ndiye ndiqhubeke kuye inkxaso kwimisebenzi yakhe, yaye njengoko kuchazwe “UYesu uyiNkosi, yaye ndifuna ukuba ukudumisa Yena…” ndithi, ugcine Uhambo ngokuya, impilo yakho, umculo kunye nenkonzo uthetha lukhulu, ngaphaya isigaba, i mic, okanye umthamo isandi, impilo yakho ngendlela ngabom ukuziphatha, uthetha lukhulu.
DavidQuinones • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:21 mna • impendulo
uhambo lee…impilo yakho kunye nothando uYesu solo mna!! Wena ngokwenene ubusise intliziyo yam. i am umntu othanda abantu ezizizo nokuba i awunalo nobuhlobo obuhle kuwe, ukuba ubunyani ephuma ngomculo wakho nemiyalezo yakho. i awakuhlangabeza Philadelphia kwiYunivesithi uCarin kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye ibe ngamava ubomi babo… iphupha lam umsebenzi ngenye imini nawe kubulungiseleli kunye nomculo…. ukugcina ukholo umhlobo wam!!!
Kevin Halloran • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:22 mna • impendulo
Great ukuva, uhambo! Qhubeka ukushumayela rapping iLizwi. Enemincili ukubona oko iNkosi akugcinele.
MattShafer • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:22 mna • impendulo
Ndiyavuya ukuba umva ukwenza umculo, kodwa, ngaphezu koko, Ndiyavuya ukuba ukuba silandela indlela iNkosi ufuna ukuya. umculo wakho, iincwadi, kunye nemiyalezo baye siyabakhuthaza olukhulu kum kule minyaka imbalwa idlulileyo eli. Enkosi kakhulu kwabo. Wena emithandazweni yam.
michael Jiménez • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:50 mna • impendulo
UHAMBO ukuba likhuthaze sonke rap zamaKristu. inkxaso sonke kwaye naziphi na izigqibo ozenzayo. Yigcine
John Widner • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:55 mna • impendulo
Trip Lee yeyona ilungileyo ukugcina up indoda umsebenzi olungileyo
Logan • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 11:00 mna • impendulo
VICTORKHIZ • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 11:06 mna • impendulo
EWE! ENKOSI kule blog POST UHAMBO! IT ekhuthazayo ndakubona ukuba zisavuliwe TO Yenza umculo KODWA ngaxeshanye INGABA Ukuhlala sithembekile kubulungiseleli IBANDLA. Ungomnye Idlelo abanetalente. Ndikhangele phambili ukukuva LIVE KWAKHONA. Ukunithandazela.
bekungeke • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 11:11 mna • impendulo
uhambo, Mna ke ndiyavuya gqiba ungandiphi uThixo ukusebenzisa kuwe umculo kanye kwakhona. I love umsebenzi wakhe, yaye ndiyavuya ukuba kungekudala ndiza kuba umculo ezisondele bedumisa uThixo. uhambo, sele lukhuthazo onjalo, kungekuphela nje abatsha, kodwa ndisemtsha, kunye nabo ehlabathini lonke. Ndiyathemba nyana wam ujika ube indoda engantliziyo kaThixo, ezifana wena, yaye uya kuvumela uThixo ukusebenzisa kuye everyway kunokwenzeka. Kubalulekile ukuba abantu bethu abatsha ube umzekelo uThixo phambi kwabo. Qhubeka ukwenza ukuthanda kukaThixo. Ndiyakholwa ukuba ngokuhlala abathobelayo, UThixo uya kuzibonakalisa uze uzise impiliso kuwe. Usikelelke!
Andrew • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 11:41 mna • impendulo
Ndiyayithanda indlela Trip Lee wenza oko kuthiwa kuye yiNkosi ukuba enze. Yena ekumlandeleni uNdikhoyo nokunika imbeko kuye umculo wakhe. Qhubeka ukwenza oko wanibiza iNkosi ukwenza.
uKalebhi Gordon • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 1:30 pm • impendulo
Andikwazi ukulinda ukuba ubone kwi WinterJam!
Robert May • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 1:32 pm • impendulo
Ndichulumance kakhulu ukubona ukuba siyaqeqeshwa ngokwaneleyo ukuba kancinane ukwenza umculo ube azinikele ngokupheleleyo usapho lwakho kunye Church kaThixo. Ayikwazi ukulinda ukuva albhamu yakho nakuba.
ukuhlonipha • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 2:48 pm • impendulo
Woow oku awesome Trip.I abasayi kulindela ukuba Vuka ukuba baphume soon.I definetly ucinga ukuba lo yelicwecwe ukuba angamchukumisi umntu eninzi people.Your umculo uphefumlela me.Continue ukuba badumise uYehova, njengoko wenza.
Iintsikelelo yonke indlela e New Zealand!
RommelAlonzo • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 3:41 pm • impendulo
Ndiye ndikhangele phezulu kuwe bhuti! Njengoko umntu na umfundi PhD kubunjineli, umfundisi yolutsha inkokeli unqulo phakathi kwezinye izinto, ukuba nzima ukufumana indlela yokusebenzisa iitalente uThixo uninike uye waphefumlela mna ukuba uyeke ukufumana ubomi Good. Kwathi kamsinya nje ndeva isihloko albhamu yakho entsha, Ndandisazi le ndlela kaThixo tellin mna lixesha lokuba sivuke, ukuba anikezele ekufumaneni ubomi Good kuye. Nokuba ndithe ndasilela, umculo wakho iyandikhumbuza ukuba ngeke. Enkosi umculo wakho kunye nomzabalazo uzibeka nge ukuze ngokulula umyalezo ngaphandle.
uSara • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 3:59 pm • impendulo
ukuhlonipha kakhulu kuwe, Trip Lee. Ungu umfo wakwaThixo. Wena bhetele omnye rap endizithandayo kunye ndandingakwazi konwaba ukuba ukuba ikhuphe umculo entsha lo gama ukufeza imisebenzi yakho usapho lwakho kunye nebandla.
Mna umbulelo kakhulu kuThixo ngenxa yokuba zikhona amagcisa njengawe. wena, ngaye kuThixo, ndizibonele iphefumlelwe kangaka phakathi kwemizabalazo zombini yam kunye nempumelelo, yaye ngenxa yoko ndikubulelayo mna ndingathanda ukubonisa umbulelo wam ongazenzisiyo. Yinto enye amaphupha am kuwe ukubona ikonsathi, mhlawumbi nguwe ngokundwendwela New Zealand okanye ndim ukuya US enye kwakho kubonisa! UThixo akusikelele nothando olukhulu kuwe nentsapho yakho emfutshane entle.
ashley • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 5:18 pm • impendulo
awesome uhambo! Qhubeka eya apho Andikhokelela wena…kwaye nceda wabelane onke amava akho emangalisayo kunye nathi njengokuba uhamba!
Brandon • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 5:55 pm • impendulo
Mna njalo ukuva, bakhuthazwe nobuciko Trip xa. Ndiya kumdumisa uThixo ngenxa loo mzalwana. Ndiyathemba ebuya Atlanta ukuze sikwazi ukwakha.
Nick • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:22 pm • impendulo
ErickCorral • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 10:58 pm • impendulo
Andikwazi kulindela ukuba le albhamu entsha. Ke ndaqalisa ukuphulaphula hip hop abangamaKristu 2013. artist Kuqala ndeva Lecrae. I ukohlukana ukusukela ndaqala ukuva Iimpahla Church. Ixesha wahamba ndaza ndaqalisa ukufumanisa malunga Andy Mineo, KB, Trip Lee, Tedashii nokunye. Zonke ezi guys’ umculo itshintshile ubomi bam. Ngokupheleleyo zatshintsha incasa yam umculo bakhuthazwa ukuba luxakeke ukholo lwam. Siyabulela UHAMBO kunye nabanye 116. Ndiyathemba ndifumana ukunibona xa ikonsathi kungekudala. Inkosi ikusikelele.
CB • EyeDwarha 8, 2014 ngexesha 11:09 pm • impendulo
uhambo, njengokuba kwaba ngaphandle umculo, I wabona umahluko kakhulu kwindlela yakho ukholo lwakho & career kwamanye 116 amagcisa. Ndiye ndakwazi ukubona & va ngenxa ngohambo lwakho ukuba ukuba owayetyekele kwi ezandleni uBawo iye wakho kuqala inombolo eyodwa (wayengathi oko akunakwenzeka ukuba other artists). Ndiya kukuncoma ngendlela yokuba kukuba malunga ekufuneni yeenjongo zakho. Ndineqhayiya ukuba fan wakho & SO abanemincili ukuba kukho umculo entsha kuwe. Ndithandaza uIsaya 60:1-2 ngapha kwakho & usapho lwakho, njengokuba ndiziva ukuba ukuvuka ukuba kuzukiswe uThixo u kukhanya ebomini bakho, kuba sele wenza ntoni kule minyaka yokugqibela. Bulisani!
JoshuaDenim • EyeDwarha 9, 2014 ngexesha 12:04 mna • impendulo
Ndiyavuya ngenxa bhuti. Ndiyazi uya kwenza nantoni na uThixo ayifunayo kuwe. Ke ukuba nithi lo msebenzi yakho yet..I'm nemincili ngokwenene ukuva oko uThixo sele ukubeka intliziyo yakho nge umculo. UThixo anisikelele umntu nemibulelo ngokundifundisa zonke izinto onazo ngawe umculo.
PS – 20/20 waba BOSS!! Hleka kakhulu
AustinRoberts • EyeDwarha 9, 2014 ngexesha 12:22 mna • impendulo
uhambo, Ndiyavuya ukwazi ukuba udale albhamu entsha. Ndiyavuya ngakumbi mayela nomba wazicelela ecaleni ukusuka umculo okwethutyana ukuze ingqalelo kwizinto ebomini bakho, ukuba wavakalelwa nifudula nikude ibaluleke ngakumbi apho aba. Kangangeminyaka ndibabonile phezulu kuwe kwakunye ezimbalwa emcees idlelane lakho ngenxa ukuba andizange ndaqalisa ukuphulaphula, into abaninzi kubiza nje amazwi womculo, I kakhulu kunokuba ambize amazwi akho, okanye iingoma kunokuba, nezingqino lyrical kunye preachings. Ngaphambi kokuva umculo wakho, Ndaba kwindawo emnyama. I eyayiwe kude iingalo kaThixo. umculo wakho, kwakunye namanye amagcisa, Wandisa sisondele kuThixo yaye kwandikhuthaza ukuba ngcono ngokwam. Ndiyabulela kuwe kwakunye nezinye emcees kwicandelo kwakho ngam neyoyikekayo waza khuthaza ukuba zisondele kuThixo. I ukuxhasa wena into oyenzayo kuba andiyenzi izinto obenzela ngokwakho. Hayi. Nizenza egameni leNkosi kwaye uhloniphe ukuba kangaka. Qhubeka wenza izinto ozenzayo. UThixo ntoni ukusebenza nawe kodwa. inkosi ikusikelele.
Lillian • EyeDwarha 9, 2014 ngexesha 8:59 mna • impendulo
Wathabatha amazwi ilungelo uphume emlonyeni wam. Ndinebhongo ngawe, uhambo, nemincili ngayo yonke into oyenzileyo ukuba unjani. :) Qhubeka!
GabeTaviano • EyeDwarha 9, 2014 ngexesha 11:15 pm • impendulo
Ezinye nje akazange ukubamba amazwi akho wesiprofeto, ukuba wena nje wayebhekisela kuThixo ekubeni phezu kwakhe Brett Favre.
DrowningInGrace • EyeDwarha 11, 2014 ngexesha 11:10 mna • impendulo
Ndiya kumdumisa uThixo ngenxa inkuthalo yakho nokuzinikela ezwini lakhe. Ixesha elichithwa albhamu yakho ibonakala kwimizila baye bakhululwa kangaka kude. Ndiyamthanda umsebenzi wakho nobulungiseleli kwaye sijonge phambili koko uThixo azigcinele kuMzimba kaKristu ngenxa yenu.
Makube lubabalo, noxolo.
julia atyabukile • EyeDwarha 14, 2014 ngexesha 9:34 mna • impendulo
osanda (4 kweentsuku) akubona nje ukuba ikonsathi eSalt Lake City, OUT. I ngokwenene Ndiyayithanda indlela ngaphaya kangaka iingoma zakho. Wena washumayela iindaba ezilungileyo ukuze ngokucacileyo, enkosi. Enkosi kakhulu ekuziseni ithemba ihlabathi egameni likaYesu. Yakuthanda!
julia atyabukile • EyeDwarha 14, 2014 ngexesha 9:35 mna • impendulo
tamsyn • EyeDwarha 19, 2014 ngexesha 3:32 pm • impendulo
Hi UHAMBO Lee. Ndiyamthanda ingoma yoloyiso yakho sweet. Ndiyamthanda ubunyani amazwi akho. ngokwenene kwanceda ndizive ngathi kukho abantu abangakwaziyo ngokunyanisekileyo zinxulumene kunye ukulwa bam njengomKristu. Ndingamkhubekisi yayo lula. Ubungqina indlela iyasetyenziswa kaThixo ngenxa yokuthobela, okt ethembekile nangona intlungu- zombini ikhuthaza umngeni kum ukuba wayedlulisela, kodwa ukugcina ngokucinezela on.Christ is soo nebhongo U. Inkosi ikusikelele! Tamsyn, Mzantsi Afrika
JesiliaLeaupepe • EyeDwarha 21, 2014 ngexesha 9:30 pm • impendulo
nomyeni wam banovuyo kule albhamu entsha kwaye ndiliphulaphule yonke ingoma leyo ethe kangaka kude Vuka. Ufumene izinto enkulu phezu kwalo bhuti. Siyavuya ukuba inkxaso kuwe uthenge albhamu yakho entsha. (Kunjalo nje, wena ubakhuthaza ENDE umyeni wam. Yena a fan enkulu eyakho-ukususela rapping, ukuba bakhe bathenge incwadi yakho, kwaye ancome uthando lwakho umfazi wakho kunye kids nendlela ukubonisa ngalo lonke ixesha ndlebe).
UThixo anisikelele bhuti. Ngamana uThixo kuqhubeka ukunika amandla kufuneka ukujongana noxanduva lwakho yonke. Ukuxhasa zonke indlela evela Bay e California.
-i Leaupepe kaThixo.
Liz • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 12:58 pm • impendulo
Waba yintsikelelo enjalo kum nabanye abaninzi. UThixo uye kuboniswe ngokucacileyo nkqu amandla yakho.
Khankanya: UYesu Kristu Empire | Christian rap Trip lokubalisa Lee Fans 'Andizange umhlalaphantsi’ Ukususela Hip Hop Game
Khankanya: Trip Lee uthi Ungaze umhlalaphantsi ukusuka Umculo | BCNN1 WP
uBilly • EyeNkanga 12, 2014 ngexesha 11:22 pm • impendulo
Bro ndakhuphela nje albhamu yakho maaaannnn iingoma ezithile phantse bezisa iinyembezi amehlo am. Enkosi reppin iNkosi umntu aye nonke yintsikelelo enkulu ebomini bam wandisa sisondela kuYesu ngomculo wakho. #116
John • EyeNkanga 21, 2014 ngexesha 6:03 mna • impendulo
uhambo, Ndiyamthanda albhamu entsha. Ukuphulaphula ngale ntsasa ngaphambi kokuba aye emsebenzini. kuyakhuthaza!
Abigail • EyeThupha 10, 2016 ngexesha 4:13 pm • impendulo
I LOVE lohambo lwakho MUSIC!!!!! I love you ukumela indlela ivangeli ngomculo wakho. Enkosi!! Inkosi ikusikelele!!!